Shiinaha Nadiifiyaha Hawada Nadiifinta Hawada Nadiifiyaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Shanyou
●Badeecadu waxay ka kooban tahay 5 lakab difaac; Bixiyaan walxaha sare iyo bakteeriyada waxtarka sifeynta.
E Waxqabadka Suuxdinta Qaybta (PFE): GB 2626 ≥95%
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQO" wuxuu daboolayaa aagga dhismaha 68,000 mitir laba jibbaaran halka aqoon isweydaarsiga qolka nadiifka ah 15,000mitir laba jibbaaran Waxaan soo iibsanay in ka badan 200 khadadka wax soo saarka maaskaro dhaqameed, iyo sagaal xariiq oo casri ah oo xawaare aad u sarreeya oo wax soo saar otomaatig ah leh. Awoodda "SHAQO" maaskaro wajiga wajiga waa 10 milyan kumbuyuutar / maalin, taasi waa 300 milyan bishii. Waxaan u dhoofineynay Ingiriiska, Faransiiska, Isbaanishka, Jarmalka, inta badan qandaraasyada dowladda oo aad u tiro badan.
Dhanka kale, waxaan horey u soo iibsanay in ka badan 200 oo xariiq oo wax soo saar ah oo ku saabsan maaskaro FFP2 / FFP3 / KN95, awooddu waxay ku saabsan tahay 4 milyan kumbuyuutar / maalin. Waxaan u geyn jirnay ururo waaweyn oo caalami ah, waxaan ku guuleysanay sumcad wanaagsan iyo amarada oo sii socda.
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQADA" waxay qaadataa "Shanyou Spirit", taas oo ah, "macaamiisha u janjeedha, tiknoolajiyada iyo tayada ayaa ah udub-dhexaadka" si loogu adeego bulshada. Waaxdeena QC waxay leedahay koox ku dhow 45 qof, inta lagu guda jiro kormeerka alaabta ceeriin, Kormeerka Nidaamka, Baadhitaanka alaabooyinka la dhammeeyay. Shaybaarka ayaa daboolaya 500m2, oo lagu qalabeeyay tas-hiilaad baaritaan oo dhameystiran oo loogu talagalay Maskaxda Caafimaadka iyo FFP2, maaskaro FFP3. Kooxda xirfadleyda ah waxay damaanad qaadayaan adkeysiga tayada sare leh.
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQADA" waxay buuxineysaa shuruudaha Heerarka Nidaamyada Tayada ee ISO 13485, Xeerka Golaha Yurub ee 93/42 / EEC, XEERKA PPE (EU) 2016/425 waxayna ka diiwaangashan tahay US FDA, Saudi Arabia FDA, iyo Australia TGA. Waxaan haynaa Shahaadada TUV Rheinland CE ee loogu talagalay maaskaro wajiga qalliinka (nooca IIR) iyo Maaskaro Caafimaad ee wajiga (nooca I, nooca II) sida ku cad EN 14683-2019. Wajiyadeena FFP2 / FFP3 waxay heleen shahaadooyinka SGS CE iyo shahaadada Universal CE sida ku cad EN149: 2001 + A1: 2009 waxayna heleen SGS Reach Report.
Cabbir: 640 * 410 * 450mm;
Xiga: Sifeynta nusa-badhka FFP3